Apple waxay dib ugu soo celisay Parler dukaanka App ka bedelka qunyar socodka | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay dib-ugu-qiraysaa Parler dukaanka App-ka iyada oo lagu badalayo qunyar socod badan
Dhowr toddobaad ka hor waan kuu sheegnay in qaar ka mid ah wakiillada la soo doortay ee Mareykanka ay dhaleeceeyeen habka wax looga qabanayo Apple xilligaas oo ay mamnuucayeen adeegsiga Parler aaladaha sumadda Mareykanka. Parler waxaa loo tixgeliyaa shabakadda bulshada ee xulashada kuwa beeniya iyo kuwa xagjirka ah ee xitaa u adeegsan kara weerarka ka dhacay Capitol. Apple ayaa ka saartay suuqa laakiin hadda Dib u soo celinta laakiin shuruudo qaar leh.
Siyaasaddu had iyo jeer waxay ku dhex milicsan tahay dhammaan dhinacyada nolosheena. Shar iyo xumaanba. Xaaladdan oo kale, siyaasaddu waxay ku xadgudbeysaa shirkad gaar loo leeyahay oo go'aansatay in barnaamijku uusan ku sii nagaan App Store maxaa yeelay wuxuu jebinayaa sharciyada dukaanka. Si kastaba ha noqotee, dharbaaxada ka dib gacanta in shirkaddu qaadatay baarka loogu talagalay ka saarista Parler dukaanka, ayaa dib u soo celisay.
Waa run oo sheekadu waa mid iswaafaqsan. Waxaan ula jeedaa Apple waxay bixisay Parler 24 saacadood si loo hirgeliyo nidaamka dhexdhexaadinta waxyaabaha. Haddii kale waxaa laga saari lahaa App Store. Shirkadda way iska caabbisay sidaas darteedna codsigii waa laga saaray sidii Apple u ballanqaaday. Si kastaba ha noqotee, bilihii ugu dambeeyay, Apple waxay albaabka u furtay in loo oggolaado barnaamijka inuu soo laabto. Waxay macquul ku salaysnayd inaad hirgalisay snidaamka dhexdhexaadinta waxyaabaha.
Macluumaadka cusubi wuxuu cadeynayaa in Apple ay markale ku soo dhaweysay arjiga dukaanka maxaa yeelay waxay hirgalisay nidaam dsi fiican u ogaada hadalada nacaybka iyo waxyaabaha kale ee xadgudubka ah. Markaa uguyaraan waxaa ku cad warqadda in shirkadda tikniyoolajiyadda ay u dirtay Koongareeska, iyadoo sharraxaysa sababta ay u soo laabaneyso. Wali waxay umuuqataa in aan lasoo dagi karin, laakiin mar hadii la ansixiyay waa arin waqti leh kahor inta aysan markale muuqan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay dib-ugu-qiraysaa Parler dukaanka App-ka iyada oo lagu badalayo qunyar socod badan
Qalabyo badan oo loogu talagalay AirTags ayaa soo ifbaxaya ka hor dhacdada galabta
Dib-u-habeyn oo ku qari walxaha bar-bar ee Mac-ga leh Bartender 4, oo hadda la jaan qaadaya M1